विन्डोज नयाँ संस्करण मा आधारित कम्प्युटर प्रणाली को धेरै प्रयोगकर्ताहरू त्यहाँ सिस्टम स्रोतहरू केही प्रक्रियाहरू को अत्यधिक खपत संग सम्बन्धित deceleration हुँदा एक अप्रिय अवस्था, सामना गर्दै हुनुहुन्छ। र यी घटक को एक सेवा Antimalware सेवा कार्यान्वयनयोग्य छ। यसलाई अहिले र हेर्न के छ। एकै समयमा, हामी प्रक्रिया निष्क्रिय गर्न दुई सरल तरिका विचार गर्नुहोस्।
Antimalware सेवा कार्यान्वयनयोग्य: यो के हो?
माइक्रोसफ्ट बारम्बार मुख्यतया आफ्नो प्रणाली को सुरक्षा ख्याल गर्नुहुन्छ भनी भन्नुभयो छ। एकै समयमा तिनीहरूले थुप्रै मानिसहरूले आवश्यक किन पनि बुझ्दैनन् धेरै पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै, तिनीहरूलाई थुप्रै काम असम्भव हुन्छ भनेर यस्तो हदसम्म स्रोतहरू लोड गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो मामला मा, हामी सेवा Antimalware सेवा कार्यान्वयनयोग्य विचार गर्नुहोस्। यो के हो? सबै भन्दा साधारण निर्मित विरोधी-भाइरस सेवा। आफ्नो स्थिर अपरेसन ब्रेक लगान प्रणाली, तर पनि अन्य एन्टिभाइरस सफ्टवेयर द्वन्द्वबाट मात्र होइन सक्छ।
Antimalware सेवा कार्यान्वयनयोग्य: अक्षम कसरी?
यो सेवा असक्षम गर्न, तपाईँले कम्तीमा दुई तरिकामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य मा, प्रदर्शन यसको आधारभूत प्रक्रिया तल उल्लिखित कार्यहरू अघि "कार्य प्रबन्धक" मा पूरा गर्नुपर्छ।
यो सेवा कार्यान्वयन फाइल MSMPENG.EXE पारस्परिक रहेको छ। यो रूख को सक्रिय प्रक्रियाहरू हेर्न र एक बाध्य बन्द गर्न आवश्यक छ।
अब निष्क्रियकरण घटक हेर्न Antimalware सेवा कार्यान्वयनयोग्य (विन 10, 8, 7)। पहिलो समाधान गर्न "कन्ट्रोल प्यानल" प्रशासन को एक खण्ड खोल्न छ, र यो मा कार्यअनुसूचक सेवा सुरु गर्न।
यसको घटक लाइन तल जानु पर्छ मा रक्षक (विंडोज डिफेन्डर), त्यसपछि दायाँ प्रदर्शन गर्नेछ चार फाइलहरू सेवाको कामको लागि जिम्मेवार छन्। प्रत्येक फाइल क्लिक हुन र अतिरिक्त मेनु, सेवा अवस्थाको ट्याबमा बिल्कुल नजाँच्ने सबै वस्तुहरू, र त्यसपछि परिवर्तनहरू बचत जहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ।
दोस्रो मामला मा, अनुसूचक सेवा के तपाईं सूची Antimalware सीधै जान सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि विन्डो को केन्द्र मा स्क्यान अनुसूचित घटक चयन गर्नुहोस्। जब तपाईं प्राथमिकता विन्डो, जहाँ तपाईं उपलब्ध ट्रिगर एक डबल क्लिक अप कल र इच्छित प्रक्रिया सञ्चालन समय वा अँध्यारो सेट गर्नेछ चयन जो ट्रिगर ट्याब, प्रयोग गर्न आवश्यक खोल्न डबल-क्लिक गर्नुहोस्।
सट्टा EpiloguE को
यहाँ, वास्तवमा, सेवा Antimalware सेवा कार्यान्वयनयोग्य बारेमा सबै कुरा। यो के हो, आषा, यो स्पष्ट छ। यो संग असक्षम सामना गर्न चाहे को प्रश्न, विवादास्पद छ। सामान्यतया, यो सिफारिस गरिएको छैन। तर साँच्चै भने यसलाई सम्भव बनाउन निर्मित Antimalware मोड्युल संग एक शक्तिशाली एन्टिभाइरस को उपलब्धता विषय भएको स्रोतहरू मा दबाव बढेको छ। द्वारा र ठूलो तिनीहरूले प्रत्येक अन्य को डबल्स छन् हुनत, निष्ठा दुवै प्रयोग गर्न राम्रो - कुनै पनि एक विधि सीमित घटक असक्षम गर्न लायक छैन। तर तिनीहरूले यो जोखिम छैन राम्रो छ, भन्नुहोस्।
यो केवल दुई तरिका यहाँ छलफल घटक असक्षम भनेर थप्न रहनेछ। यो रजिस्ट्री को सम्पादन कुञ्जीहरू प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ पनि धेरै विधिहरू, जस्तै गरेर। तर यो एक सामान्य प्रयोगकर्ताको लागि बरु जटिल जस्तो लाग्न सक्छ, र महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू सम्भव त्यसपछि सारा सिस्टम काम गर्न इन्कार हुनेछ भनेर बनाउन।
के सर्भर प्रमाणपत्र मान्य छैन भने?
कसरी एक ल्याप्टप मामला चोर्न चोर तपाईंको जानकारीको रक्षा गर्न?
कसरी आफ्नो कम्प्युटर नयाँ भाइरस विरुद्ध सुरक्षा गर्न।
कम्प्यूटर सुरक्षा: एक rootkit के हो?
Ownerless सम्पत्ति। नागरिक कोड
सेलिब्रेटीहरू र आफ्नो क्षमता Overwatch
स्याउ पाइ जूलिया Vysotsky देखि: को नुस्खा र सुझावहरू मालिक बाट
कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस सफ्टवेयर स्थापना गर्न। कम्प्युटरमा सबै भन्दा राम्रो एन्टिभाइरस
"एन्ड्रोइड" को लागि आफ्नो इमेल क्लाइन्ट फेला!
अनुहार धुने "Libriderm": गुणस्तर र प्रभावकारिता बारेमा विशेषज्ञहरु 'उल्लेख
गर्मी महिलाहरु को लागि 50 वर्ष पछि जूता, के तपाईं र लगाउने सक्छन् छैन
गम बुनाई माछा को रूपमा: विधिहरू, सर्किट र समीक्षा। कसरी मसूडों देखि मिसिन मा एक माछा बुनाई गर्न